Magnet Cow - Shiinaha Ningbo Sine
Waxyaabaha: Magnet Ceramic ama AlNiCo Magnet
Fasalka: Y30 / Y30BH, alnico 5, alnico 2
Size: 3/4 "Dia. X 3-3 / 8 "Long, D12.7 * 50.8mm, D12.7 * 76.9mm ama Sida laga soo xigtay Shuruudaha of Macaamiisha
Baako: Xirmada Standard for Air Gaadiidka & Badda Gaadiidka
Sine magnetic CompanyLimited astaysto magnet-sac codsiga macaamiisha.
Magnet Cow waa nooc ka mid ah magnet joogto ah wax soo saarka loo isticmaalaa sida qalab caafimaad si loo daweeyo ama looga hortago cudurka hardware taasoo si fudud u dhacay xoolo / sac. Inta lagu jiro daaqa ee beeraha, xoolaha ama sac oo inta badan cunaan qaar ka mid ah waxyaabaha kale sida musmaarro ama qaybaha kale macdan ka cawska. Iyagu ma caynkan ah cuntada si buuxda laakiin iyaga si toos ah la gooyo.
The musmaarro iyo waxyaabaha kale macdan ah oo af badan oo aan la milmaan karo iyo kaas oo noqon doona sababta ugu weyn ee cudurka hardware.
Magnet Cow dhoobada
Dhinaca mid, magnet lo'da soo jiidan karaan shay macdan ah sida musmaarro, boolal iyo fiilooyin ka masruufaan. Dhinaca kale, haddii walxaha macdan ayaa liqay lo'da by shil, magnet sac la isugu gudbin karaa afka tuubo gelin rumen ah lo'da, oo la soo jiitaan qaybo bir ah. Magnet Cow ka waxyeeleeyeen ciddiyaha fiiqan ama alaab kale oo bir ah ilaalin kara marinka dheef shiidka iyo ilaalinta caloosha lo'da. Ma jiri doonto wax saameyn liddi ah oo dhan.
Fadlan si xor ah noo soo diri weydiisay haddii aad raadinayso magnet dhoobada / ferrite lo'da ama magnet lo'da alnico.
Previous: magnet Ferrite
Next: Magnet warshadaha
Magnet Sign Car
Korontada magnetic Chuck
qalabka xafiisyada Magnet
Inkjet magnetic Paper Printable
Meegaarka Photo magnetic
Biyaha Daaweynta Magnet Bar